जानी राख्नुहोस् : बच्चाले सिक्का , गुच्चा ,एसिड , ब्याट्रीहरू वा तिखो्धारितो बस्तु निलेमा के गर्ने ? - Purbeli News
जानी राख्नुहोस् : बच्चाले सिक्का , गुच्चा ,एसिड , ब्याट्रीहरू वा तिखो्धारितो बस्तु निलेमा के गर्ने ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ११, २०७७ समय: १९:११:४९
उत्सुक र चकचके स्वभाव बच्चाहरूको गुण नै हो । सिक्का, गुच्चा, साना ब्याट्री लगायत अन्य धारिलो बस्तु उनीहरूले मुखमा हाल्छन् । गुच्चा निलेमा गोलो प्रकृतिको हुने भएकाले पेट, आन्द्रा हुदै दिसाबाट बाहिर निस्किन्छ । खानेनलीमा सिक्का अड्कियो भने तुरुन्त निकाल्नुपर्छ । पेटको भागमा बसिरहेको छ, अरु लक्षण देखाएको छैन भने ४ हप्ता कुर्न सकिन्छ । तर सिक्काको आकार ठूलो भएमा वा अन्य तिखो्धारितो बस्तु भएमा तुरुन्त निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।